ESI MEE KA EBE GBARA ỌCHỊCHỊRỊ NA YOUTUBE - YOUTUBE - 2019
Na-agbanye na nzuzo na YouTube
Ọ na-emekarị na onye ọrụ na-abanye na peeji nke VKontakte chọtara ọtụtụ ndị enyi ya karịa ka ọ nwere n'oge nleta ikpeazụ. N'ezie, ihe kpatara nke a bụ iwepụ gị site na ndị enyi site na nke a ma ọ bụ onye ahụ.
Ị nwere ike ịchọpụta ihe mere ị ga-eji wepụ naanị ndị enyi naanị gị. Otú ọ dị, o nwere ike ịchọpụta onye kpochapụrụ gị site na ndị enyi n'ọtụtụ ụzọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ dị ezigbo mkpa ịchọpụta oge banyere ụdị omume ahụ ma ghọta ihe kpatara nhichapụ ma ọ bụ wepu aha na onye ọrụ ehichapụ.
Otu esi achọpụta onye lara ezumike nká site na ndị enyi ya
Ịchọta onye na-adịbeghị anya hapụ ndepụta enyi gị dị mfe. Iji mee nke a, ịnwere ike ịme ụzọ abụọ kachasị mfe, dabere na mmasị onwe gị. Usoro ọ bụla dị irè ma nwee àgwà nke ya.
Ọ bụrụ na enyi gị apụla na ndepụta ndị enyi, ikekwe ihe kpatara nke a bụ iwepu ya na netwọk mmekọrịta a.
Iji chọpụta banyere onye hapụrụ ndepụta ahụ, achọrọ gị iji mmemme pụrụ iche ma ọ bụ ndọtị. Nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe ịkwesịrị itinye data ndebanye aha gị na enyemaka nke atọ ma ọ bụ na mmemme, nke, n'ime ọtụtụ, bụ wayo maka nzube nke hacking.
Usoro 1: jiri ngwa VKontakte
Na netwọk mmekọrịta a, ọtụtụ ngwa nwere ike ọ bụghị nanị na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla, mana o nwekwara ike inye ọrụ ndị ọzọ. Nanị otu n'ime ihe ndị a VKontakte nwere ike inyere gị aka ịchọpụta onye hapụrụ ndepụta enyi gị.
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ngwa ngwa ahụ, ị ​​nwere ike iji ụdị ndị ahụ. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ọ bụla, ṅaa ntị na mgbasa ozi ya n'etiti ndị ọrụ - ọ ga-adị elu.
Usoro a na-arụ ọrụ kpam kpam site na nchọgharị gị. Isi ihe bụ na VK.com ngwa gosipụtara n'ụzọ ziri ezi na ihe nchọgharị Ịntanetị.
Mepee ihe nchọgharị weebụ, banye n'ime ebe nrụọrụ weebụ. netwọk VKontakte n'okpuru aha njirimara na paswọọdụ gị gaa "Egwuregwu" site na isi menu.
Gaa na peeji nke na ngwa na akara "Egwuregwu site na egwuregwu".
Ka nyocha ọchụchọ tinye aha nke ngwa ahụ. "Ndị ọbịa m".
Gbaa ngwa ahụ "Ndị ọbịa m". Biko rịba ama na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ kwesịrị ịdị oke ka o kwere mee.
Mgbe ịmalite itinye ntinye ahụ, ị ​​ga-ahụ interface dị mma nke na-ekwu okwu na njikwa.
Pịa taabụ "Ihe niile banyere ndị enyi".
N'ebe a, ị ga-agbanye gaa taabụ "Mgbanwe ndị enyi".
Ndepụta dị n'okpuru ga-egosipụta usoro mgbanwe niile nke ndepụta enyi gị.
Naanị ndị na-ahapụ, chọpụtakwa "Gosi ndị enyi enyi".
Ihe bara uru nke ngwa bu:
ezumike zuru oke nke mgbasa ozi iwe;
mfe nke interface;
ozi nyocha nke omume nke ndị enyi.
Enweghi ike ikwu na ihe nadighi nma bu ihe kwesiri ntukwasi obi n'olu ahu, ihe omuma nke ntinye di otua.
Ọ bụrụ na ị bu ụzọ wụnye ngwa ahụ, data ezighi ezi nwere ike ịnọnyere ndị ọrụ ha mere na nso nso a.
Ugbu a, i nwere ike ịga na nke ndị mmadụ hapụrụ ma chọpụta ihe kpatara ya. Na ngwa a, a na-ebelata ọ bụla njehie metụtara enweghị ike nke data enyere. Site n'ụzọ, nke a na-egosipụta site na nnukwu ndị na-ege ntị nke ndị ọrụ obi ụtọ na-eji ngwa. "Ndị ọbịa m".
Usoro 2: Njikwa VKontakte
Usoro a nke ichota ndị enyi ezumike nká na-emetụta naanị ndị ahụ hapụrụ gị na ndị debanyere aha. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na mmadụ ewepụghị gị naanị, ma tinye ha na blacklist ya, mgbe ahụ, a pụghị ịmata onye ọrụ a n'ụzọ dị otú a.
Iji jiri usoro a, ọ dị gị mkpa inwe ihe nchọgharị weebụ ọ bụla, gụnyere ngwa ngwa VKontakte. Enweghi ihe di iche iche siri ike karia, ebe VK.com n'udi obula nwere ngalaba di nma, nke anyi ga eji.
Banye weebụsaịtị VC n'okpuru data ndebanye aha gi ma gaa na mpaghara site na isi menu "Ndị enyi".
N'ebe a ị chọrọ site na nhọrọ ziri ezi ka ịgbanwee gaa na "Enyi na-arịọ".
Dabere na ọnụnọ nke arịrịọ abata (ndị debanyere aha gị), enwere ike ịnweta taabụ abụọ Igbe mbata ma Ọpụpụ - Anyị chọrọ nke abụọ.
Ugbu a, i nwere ike ịhụ ndị na-ewepu gị n'aka ndị enyi gị.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ngwa ngwa gị na nhichapụ nke ndị enyi gị dị mfe nghọta n'etiti ibe gị. N'okwu mbụ, bọtịnụ ga-egosipụta n'okpuru aha onye ahụ "Kagbuo bid", na nke abụọ "Wepu aha".
Rịba ama na bọtịnụ ahụ "Wepu aha" ga-abụ ma ọ bụrụ na onye enyi gị rịọrọ ka onye ọrụ ọ bụla akwadoghị ya.
Ikpe ikpe n'ozuzu, usoro a anaghị achọ ihe ọ bụla n'aka gị - gaa na ngalaba pụrụ iche nke VKontakte. Nke a, n'ezie, nwere ike iwere dị mma. Otú ọ dị, ma e wezụga nke a, usoro a enweghị uru ọ bụla, n'ihi oke arụmọrụ dị elu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị maghị ndị enyi gị nke ọma.
Otu esi amata ndi enyi ala lara ezumike nká - jiri ngwa ma obu usoro atumatu - i kpebie. Ezigbo ihu!